Home Wararka Kulan looga hadlay Amniga Doorashada oo lagu qabtay saldhiga Booliska Garoonka Muqdisho
Kulan looga hadlay Amniga Doorashada oo lagu qabtay saldhiga Booliska Garoonka Muqdisho
Kulan looga hadlayey amniga guud ee dalka iyo kan doorashada ayaa ka dhacay saldhiga Booliska ee AirPort-ka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Kulanka waxaa hoggaaminayay Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, waxaana ka qeybgalay Taliyihii xilka laga qaaday ee Ciidamada Booliska Soomaaliyeed, Madaxweynaha Puntland, Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud, Shiikh Shariif Shiikh Axmed, Madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo Xildhibaano ka tirsan Golaha shacabka JFS.
Kulanka ayaa waxaa xoogga lagu saaray in xildhibaanada loo ogolaado inay soo galaan Teendhada Afisyooni oo la filayo in saacadaha soo socdo lagu qabto doorashada guddoonka Golaha Shacabka.
Kulanka kadib ayaa waxay wararka sheegayaan in xildhibaano badan oo kor u dhaafayo 100 ay gaareen hoolka Afisyooni oo ay horey ugu sugnayeen xildhibaano tiro yar oo mucaaradka u badnaa.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska ayaa illaa saaka xirtay waddooyinka soo gala Garoonka diyaaradaha iyo Xerada Xalane, waxaana howshaan gadaal ka riixeysay Villa Somalia oo diidan inay kulanka ka qeybgalaan xildhibaanada lagu soo doortay Ceelwaaq.
Guddoomiyaha kumeel gaarka ah ee Golaha Shacabka Cabdullaahi Dhabancad ayaa sheegay inay ka go’an tahay in Maanta la qabto kulanka Golaha Shacabka si loo doorto guddoomiyaha cusub.
Previous articleGuddoomiye Dhabancad oo baaq u diray xildhibaanada
Next articleXildhibaanada Ceel Waaq oo Doorashada ka qeyb galaya & Farmajo oo guul darro weyn soo gaartay
Puntland oo laga helay qofkii ugu horeeyay oo qaba cudurka CoronaVirus
Bangiga Adduunka oo xayiraad saaray Wasaaradda Qorsheynta, Maaliyadda iyo Shirkadda ADP